पल शाहाको फ्यानहरुका लागि फेरि आयाे यस्ताे दु:खद खबर ! – Ramailo Sandesh
पल शाहाको फ्यानहरुका लागि फेरि आयाे यस्ताे दु:खद खबर !
उच्च अदालत पोखराले अभिनेता पल शाहलाई थु`नामै राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश उज्वल शुक्ला र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको इजलासले जिल्ला अदालत तनहुँको आदेशलाई सदर गरेको हो । यसअघि आजै दुवै पक्षका कानुन व्यावसायीले बहस गरेका थिए ।
उच्च अदालतमा पलको तर्फबाट कानुन व्यावसायी कमलामोहन वाग्ले, जगदीशचन्द्र पान्डे र मिलनध्वज शाहले बहस गरेका थिए । विपक्षमा सरकारी कानुन व्यावसायी सहन्यायाधिवक्ता इश्वरीप्रसाद ढकालले बहस गरेका थिए ।
पीडित गायिका र उनका परिवारले पछिल्लो समय अदालतमा बकपत्र गर्दा बयान फेरेका थिए । बयान फेरे पनि अदालतले अभियुक्त पललाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
याे पनि, पछिल्लो २४ घण्टामा थप १४ जनामा को- रोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १ हजार ४१३ जनाको पीसीआर परीक्षणमा ११ जना र १ हजार १८२ जनाको एन्टीजेन परीक्षणमा ३ जना गरी १४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा को- रोनाबाट ८ जना निको भएका छन् भने हाल देशभर १०१ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । जसमध्ये १०० जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने १ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । को- रोनाका बिरामीमध्ये १ जना आईसीयूमा उपचाररत् छन् ।
बिहीबार थपिएसँगै नेपालमा को- रोना संक्रमितको कुल संख्या ११ लाख १९ हजार ४०५पुगेको छ । वितेको २४ घण्टामा को- रोनाको कारण कसैको पनि मृ- त्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै नेपाल मृत्‍यु हुनेको संख्या ११ हजार ९५२ पुगेको छ भने ९ लाख ६७ हजार ११० जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
वितेको २४ घण्टामा को- रोनाको कारण कसैको पनि मृ- त्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पाँच वर्षअघि निर्देशकले नै गरेका थिए मिरुनामाथि ह्यारेसमेन्ट, बाहिरियो रहस्य
हत्केला चिलायो भने पैसा पाइन्छ भनेर मख्ख नपर्नुहोस्, हुनसक्छ यस्तो समस्या